Namuhla abantu abaningi Ukhetha amapuleti elincane kunokuba Smartphones. Omunye khetho sinjalo apharathasi Treelogic Brevis 715DC 3G. abanikazi Izibuyekezo uqinisekise ukuthi ukusebenza yanele yonke imisebenzi edingekayo. Futhi kuyiqiniso - PDA yesimanje bayakwazi esikhundleni umakhalekhukhwini ezivamile. Ungashayela, "imiyalezo" wathumela ku-inthanethi zeselula nangale. Futhi nje ithoyizi ukudlala noma ukubukela ibhayisikobho - Kulula kakhulu esikrinini esikhulu kuwo. Yini enye edingekayo ukuze ujabule?
Ngakho, ake ufunde kabanzi mayelana naloku kedivaysi njengoba Treelogic Brevis 715DC 3G (ukubuyekezwa kanye izici iqiniso).
Thina siqale ukubonakala
Yonke phambi iphaneli uvala iwindi. Phakathi screen. Uhlaka emhlabeni akuyona enkulu kakhulu futhi ubukeka ngempela kucocekile. Ingxenye engenhla kungabonwa ngaphambili ikhamera nezinzwa. Ngaphansi esibukweni ibekwe logo ye umdali inkampani futhi efakwa endlebeni.
ikhava Emuva - yensimbi. Kuphela phezulu, eduze ikhamera, kuyinto faka plastic, okwakuyothi ngaphansi kwawo Slots ezifihliwe ngamakhadi SIM khadi. Ibid elise kanye antenna. Ngo ekhoneni ephansi kwesokunxele kuyinto Izinsimbi isikhulumi.
USB-isixhumi noJack abasebenzisi 3.5 embobeni uzothola phezulu idivayisi Treelogic Brevis 715DC 3G. Izibuyekezo zabantu ifakazela lula wale ndawo. On ohlangothini lwesokunene Phiko inkinobho amandla, rocker ukulawula ivolumu, futhi ungabona belilokhu Hlela inkinobho.
umklamo Gadget silula, awusebenzi ivelele bese ubheka extravagances ewubukhazikhazi Nokho ezishibhile, kodwa ngempela nice.
Lokho umsebenzisi elinde iphasela? Okokuqala kuyinto Yiqiniso, ithebhulethi. Kamakhi mayelana nomshini ephelele futhi USB OTG ikhebula, adaptha sokuzivuselela. Kukhona ibhukwana lapho itholakala khona kubekwe amaphuzu ayinhloko operation nezici zedivayisi.
Treelogic Brevis 715DC 3G: izici ukusebenza
Processor - ezimbili-core, imodeli 1.33 GHz yayo - MediaTek MT8312. Ihluzo namafutha akulona imodeli yakamuva - Mali-400MP. Kunzima ukukhumbula ngisho siphi ngonyaka kulezi zici ezazikhuluma futhi kuze kube yimanje. Nokho, kuyafaneleka ukuthi lisebenza ngokushelela nangokufanele ukusebenza yonke imisebenzi ezidingekayo, futhi ngaphandle amabhuleki, uchaza apharathasi Treelogic Brevis 715DC 3G. Izibuyekezo zabantu asebethole wathenga ke, kuyinto iwubufakazi balokho.
Kafushane: izici ezikhona kwanele 'emsulwa "Android" akuyona hung. Kodwa kubalulekile kusengaphambili ukuxwayisa abathengi - ikakhulukazi umsebenzi ngamandla akufanele abangayilindela kuye.
kudivayisi Memory, uveze amaqiniso njengoba enjalo, akwanele. Standing gigabytes 4 kuphela. Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi Yiqiniso, iyatholakala ingasaphathwa - mayelana 2.5 GB. Lona omncane kakhulu, uma esetshenziswa Treelogic Brevis 715DC 3G ithebhulethi njengoba itilosi - amabalazwe Russia nesisindo azungeze 3 GB.
Nokho, musa uphatheke kabi ngaphambi kwesikhathi. Lokhu kusimo sekuqediwe, njengoba abakhiqizi sakha slot imemori khadi kuze kube u-32 GB. Kufanele kuqashelwe ukuthi imemori 512 kuphela MB, okuyilona elisebenzayo futhi ezincane. Nakuba isicelo esilula ukuthi kwanele.
Iziteshi ezikufanelayo imishini yezokuxhumana engenazo izintambo
Ngokuphathelene ukuxhumana okungenantambo ungasho into eyodwa - edingekayo khona okungenani - futhi zonke. 3G kokubili amakhadi sim, i-Bluetooth ver. 4.0, i-Wi-Fi b / g / n ne-GPS.
Manje sibheke kudivayisi ukubonisa. Lokhu capacitive IPS isikrini nge HD nesinqumo, 1024x600 pixels. Ovundlile - 7 amasentimitha. Buka amavidiyo zisebenzise i-Internet kwi-screen elikhanyayo futhi multi-umbala - uyintokozo.
Ngokuqondene amakhamera, okuthile ngabo ungasho amazwi ezintathu - zilapho. Futhi phambi kanye main babe isinqumo 0.3 MPX. Singasho ukuthi sokuqala ngempela ofanele izingcingo ku-Skype kanye selfie. Ngokwemvelo, iphupho isithombe enhle akuyona ngisho nokuzihlupha uzama, kusukela izithombe nje ezimbi.
I umthamo webhethri ka 2400 mah ephethe ophethe amahora mayelana 5, okuyinto encane kakhulu idivayisi ephathekayo. Kodwa, futhi, konke kuxhomeke embonweni womuntu - into esemqoka ukuba siyiqonde ukuthi iyini esimweni esithile. Njengengxenye isofthiwe - "hamba-ze» Android 4.2.2 ngemadlana sasivumela elincane isofthiwe efakwe ngunjiniyela. Yethula ukwesekwa OTG.
Gadget Treelogic Brevis 715DC 3G Kwatholakala kuhle - ngentengo isabelomali inikeza ukusebenza smartphone. Isikrini esikhulu kwenza kube nokwenzeka ukuba ujabulele umfanekiso egqamile futhi ecacile. Uhambo iba igajethi e itilosi elinolwazi, ngiyabonga zokusekela imisebenzi navigation. OTG ikuvumela ukuba uhlele amadokhumenti kusuka drive flash kuphi, ngaphandle, njengoba kukhona i-Bluetooth, ungaxhuma ikhibhodi ukuvula ithebhulethi ibe ehhovisi esiteshini esincane. Nokho, uma kungekho lutho olunye olwenzayo ke idivayisi kungasiza kudlule isikhathi linesizotha neresursoemkoy umdlalo. Ngenxa yalokho, siyabona ukuthi idivayisi intengo inikeza ukusebenza ezibanzi engumyeni womuntu ewusizo kakhulu ekuphileni kwansuku zonke.
Indlela ukukhetha heater odongeni-agibele amahhashi. heater Ikhaya: Izibuyekezo
Yikuphi okungcono: IPS noma AMOLED? Qhathanisa futhi umbono weningi
Generator Kapanadze: isikimu kanye nencazelo. Generator Kapanadze izandla siqu
Lezi 5 amaqiniso mayelana jeans blue kuyokushiya umangele wonke umuntu!
Amaphuzu ukudoba: ukhethe ayinamphoso
Zabesifazane izikibha - izingubo yokuqala futhi stylish